Shiinaha ugu fiican ee 3-aad ee loo yaqaan pto Rotary tiller for tractor Factory iyo Manufacturers | Zhicheng
Tilmaame-yaashu waxay leeyihiin shaqooyinka jebinta sagxadda hoose, dib u soo celinta qaab dhismeedka carrada, hagaajinta awoodda haynta qoyaanka ciidda, baabi'inta haramaha qaar, yareynta cudurada dhirta iyo cayayaanka, heerka dhulka, iyo kor u qaadista heerka beeraha. hawlgallada makaanikada.
1. Gudbinta: silsiladaha la wado.
2. Sanduuqa garaafka (Graphite gearbox) wuxuu ka samaysan yahay bir bir lagu tuuro.
3. Qaabka saxanka xannibaadda waxaa lagu sameeyaa goynta laser, meesha wax lagu hagaajiyo.
4. Qalabka silsilada lagu hagaajin karo.
5. Taargooyinka difaaca dhinaceeda waxaa lagu daraa qeybta dambe ee gadaasha.
6. Dhererka toorida waa la hagaajin karaa.
7. Kaadida ayaa kujira heshiis kulul iyo baaritaan gaar ah
Tilmaan culus oo culus
Hilibka dambe ee la isku hagaajin karo ee amniga iyo sidoo kale bixinta sifiican oo siman ~ 6 kaadiheysyo adag oo dheraad ah oo loogu talagalay qulqulka ciidda sare ee dusha sare ah ~ dhererka dhererka lagu hagaajin karo si loo xakameeyo qoto dheer ~ naqshad dheeraad ah oo adag oo loogu talagalay nolosha dheer & isku halaynta.
1. Waxaan ku mashquulnay mashiinada beeraha in ka badan 10 sano.
2.Waxaan leenahay tas-hiilaad sifiican u qalabaysan iyo nidaam kantarool tayo sare leh.
3. Warshaddeenna ku taal Beerta warshadaha oo leh gaadiid ku habboon.
4. Waxaan soo saari karnaa wax ka badan 2000 oo meelood oo loo yaqaan 'Rotary Toler bishii'.
Hore: Bar tilmaameedka pto trave mower with mo
Xiga: Saddex dhibic oo tiller tiller / 3 4 5 6 7 ft tiller tiller iibinta
3 Barta Hitch Rotary Tiller
3 Barta Hitch Tiller
3 Qalabka Tiller ee Iibka
3 Meel Gawaarida Loogu Talo Galay Kireystayaasha